Nhau Blog yeIndia - THE INDIAN FACE
5 MATINJI EKUCHENGETA MASANGOLASE AKO
Une magirazi ezuva here The Indian Face uye hauzive kuti ungazvichengeta sei kuti uvimbise mamiriro avo akakwana? Usanetseke! Muchinyorwa chino tichakupa 5 mhinduro dzinogoneka kuitira kuti iwe ugone kugadzira, nenzira yekumba, mamwe matsigiro ekuachengeta. Aya ndiwo matipi anobatsira ane chokwadi chekuti achashanda kwauri, uye isu takamboedza. Uchadziedzawo here?
VAKO VANODA VANOGONESESA DZVO FAMBA MUCAMPER
Mazuva mashoma apfuura takakuudza zvese nezve camper vans, asi ikozvino taona kuti kune akawanda vanokurudzira avo vanga vachida kubheja pane ruzivo kushandisa zororo rakasiyana. Uye iwe hauzive kunakidzwa kwavakaita kuseri kwegumbo! Gotzon Mantuliz, Daniel Illescas, Susana Molina, Madame de Rosa, Jonan Wiergo ... Mushure mekuvaona, iwe uchazoda kuzviedzawo!
Zvine zvitaera zvakasiyana zve magirazi ezuva evakadzi izvo zvinotsanangura chimiro chako nehunhu, kuve pamberi. Tinoda kukupa iwe 'Soma, Southcal, Lombard neLaguna', iyo yauchazoda kuve nayo muwadhiropu yako: inochinjika, nyowani uye yakajeka. Uye zvakare, ivo vave chishongedzo icho kunyange kana ivo vane mukurumbira vevanokurudzira vanopotsa. Uri kuzoipotsa here?
Simba rekufungisisa uye kufunga mumitambo
Kufunganya, kushushikana, uye kusatarisira zvinogona kuve zvinhu zvinokanganisa hupenyu hwedu tisingazvizive. Dzimwe nguva isu tiri pano mumuviri, asi pfungwa dzedu dziri munguva yakapfuura kana mune ramangwana. Ndokusaka muchinyorwa chedu nhasi, Leticia Montoya, nyanzvi yezvepfungwa yemitambo, inotsanangura kukosha kwekudzidzira iyo Kufungisisa pamwe nemitambo kana tichida kuwedzera mashandiro edu.
surf, skate uye ... surfskate
Vaya vakave nepfungwa yekuunza pamwechete maviri emitambo iyo inoburitsa pfungwa huru kwazvo yerusununguko uye kugadzira iyo surfskate,Iwo # mweya wemweya pasina kupokana. Muchinyorwa chedu nhasi tinokuudza nhoroondo, ruzivo rwemutambo uyu, asi zvinotonyanya kukosha, tinokuyeuchidza kuti nguwani dzedu Born To Skate, Born to surf y Born to be Free ndidzo dzinonyatso dudzira.
Gordy Ainsleigh: Kubva kumutasvi kuenda kumuumbi weiyo Ultra Trail
Iwe uri mumwe weavo vanotenda kuti zvese zvinoitika nekuda kwechikonzero? Mushure meichi chinyorwa, iwe unozosimbisa ichi chivimbo. Nekuti paivepo panguva iyoyo, mujaho wakaitirwa vatasvi nemabhiza avo, asi aive murume akahwina. Wakagadzirira kudzidza nyaya yekuti Ultra Trail yakazvarwa sei? Usapotsa ichi chinyorwa.
Kutarisa: Kekutanga nguva pamitambo yeolimpiki
Kufamba kuri chikamu cheMitambo yeOlympic chinhu chinotizadza nekudada. Uyu mutambo unotamba nemhepo nemafungu zvinounza kunzwa kweadrenaline, rusununguko uye tsinga kana uchingotora iyo yepamusoro sefungu, yakatikurudzira kuti tigadzire kuunganidza kwedu kunyuka nekupararira:yakagadzirirwa vadikani vekunakidzwa. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kubatanidzwa kwekufambisa mumaOlimpiki, usapotsa ichi chinyorwa.
Kukosha kwedzidzo muhunhu kuburikidza nemitambo
Kudzidzira mutambo kupfuura kuzvigadzirisa panyama, zvakare chishandiso chakasimba chekusimbisa uye kana zvisingaiti, hunhu kuburikidza nekubatana pamwe chete uye neumwe neumwe. Vhiki rino Leticia Montoya, nyanzvi yezvepfungwa yemitambo, inotidzidzisa zvese nezve iyi nyaya. Uri kuzoipotsa here?
Isu tinoziva kuti zvakaoma sei pakutanga kusarudza magirazi ezuva anonyatsokodzera ako rostro uye hunhu hwako. Ndosaka nhasi tagadzira gwara nemitemo mitatu yekutanga, uteedzere nguva dzese paunoenda kunotenga yako Magirazi ezuva. iwe unoda kuziva kuti ndeyei? Verenga isu nekuti mu The Indian Face Tine magirazi iwayo awanga uchitsvaga zvakanyanya.
Pfungwa dzinogona sei kuwedzera njodzi yekukuvara?
Kukuvara kwemitambo hakuitike netsaona. Muchokwadi, yeiyo kukuvara kwemitambo ndimi mune basa. Zvinoita kunge zvisinganzwisisike kwauri here? Kune muvengi akanyarara anotarisira kuitira kuti kukuvara ikoko kuitike uye kuitike. Kana iwe uchida kuziva zvatiri kutaura nezvazvo, gara nekuti chinyorwa ichi chinokufarira! Leticia Montoya, nyanzvi yedu yemitambo, anotitaurira zvese.
Simba reruzhinji pamitambo yekuita
Wati wamboshamisika here kuti mutambi anofanira kunzwa sei kana achirohwa kana kukurudzirwa neruzhinji? Kana tikazviisa mumamiriro avo ezvinhu, taigona kufungidzira zvese kubva mukutya kusvika pakufara. Asi kuti iwe unzwisise zvirinani, ndiani ari nani kupfuura Leticia Montoya, wezvepfungwa wezvemitambo, uyo anokuudza zvese zvakadzama nezve kukanganiswa kweruzhinji pamitambo. Uri kuzoipotsa here?
10 zvinhu nezvaDanny León: Mambo weSpain skateboarding.
Skate yakaonekwa muhupenyu hwe Danny Leon nemukana, kana zvakadaro Madrilenian anodaro, ndiani mumwe wevanonyanya kuita skaters muSpain. Mutambi akapa twist kune izvo izvo kuita mutserendende muchando Munyika yedu. Kuve mumwe wekutanga kuita iyo Mctwist, hunyengeri mashoma skaters ave kukwanisa kusimuka. Wakagadzirira kuwana hupenyu hweSpanish 'mambo we skateboarding'?
Zvinhu gumi zvausina kuziva nezve Kepa Acero: kufambisa, kufadza uye hupenyu.
"Rwendo chiitiko chinonakidza pamwe nekugona kwekutadza". Surfer, altruist uye adventure adventure. Kepa Simbi, akaona hupenyu hwake hwapfuura pamberi pemeso ake mushure mekuita tsaona yakakomba achifashura muMundaka, Vizcaya. Kubva ipapo, chiratidzo chake chehupenyu chakachinja uye kufarira kwake kunyora iyo egungwa huzivi hwehupenyu hwakakura sei. Akafamba nyika achitsvaga mafungu akanakisa, asi sezviri pachena ndivo ndivo vakamuwana. Iwe unoda kuziva ndiani watiri kutaura nezvake?
10 things about Jonah Lomu you might not know
Mutambi akanakisa we Rugby kubva munyaya: Jonah lomu, iyo ngano yakatungamira kuhunyanzvi hwe rugby uye yakasimudzwa yakamirira New Zealand. Kune avo vanoti kungoona mavhidhiyo aJonaah panhandare yekutamba zvakakwana kuti unzwisise kuti mutambi uyu akabva kune imwe nyika, anopfuura makirogiramu zana emhasuru nekumhanya kunoshamisa pamunda, ndiwo mamwe maitiro eichi mutambi kubva kuMaori kwakatangira. Wanga uchimuziva here?
10 zvinhu zvausina kuziva nezve Álvaro Bultó: Hupenyu hwekunyanyisa
Shiri murume. Kuti uzo Álvaro Bultó Hupenyu hwaive pamusoro pekupfuura miganho zuva nezuva uye kurarama zviitiko zvakanyanyisa, ndiyo yaive chirevo chake. Hazvina kutora nguva kuti ave mukurumbira nyika payakatanga kuona zviitwa zvechiCatalan, pakati pavo matambudziko ake akakurumbira e bapiro zvinosetsa kuti, chimwe chazvo chakamutorera hupenyu hwake. Pano tinoongorora zvimwe zvezviitiko zvake, uri kuchipotsa here?
10 zvinhu nezvaKelly Slater iwe ungangodaro waisaziva
'Slats' kana 'Slater' ndiyo nzira iyo ino shasha yekushambadzira nyika inowanzozivikanwa: Kelly slater. Pasina kupokana, akagadzwa saMambo weMafungu, pakanga pasina munhu akaenzana tarenda renhoroondo iyi yeFlorida. Kune vanoda egungwa, Slater akaratidzira kumberi uye shure mumutambo uyu, izvo maererano naye; Isu tese tinotakura mweya wekusevha mukati mechinhu chakakosha kuimutsa. Ichokwadi free spirit, Iwe unoda kuziva zvakawanda?
Zvinhu gumi zvawaisaziva nezve mudhudhudhu Eddy Merchx: 'Iyo Cannibal'
Vamwe vanomuziva semunhu anonyanya kuchovha bhasikoro munyika, vamwe vakasarudza kumuti "Anodya vanhu". Chokwadi ndechekuti Eddy mutengesi anga aine imwe nyota isingaguti kana zvasvika pakukwikwidza nekuunganidza kukunda. Hunhu hwakamutora kuenda pachikuva kanopfuura kamwe chiitiko. Uyu mubhasiketi weBelgian anozivikanwa nekumaka chiitiko chakakosha munhoroondo ye kuchovha bhasikoro.Akaisa bhaa repamusoro mukumuka kwake kwezvizvarwa zvinotevera zvevatyairi. Tokuudza here?
Zvinhu gumi zvaungade kuziva nezvaAlex Honnold: Iye anokwira uyo asingatyi kufa.
Murume Asina Kutya Here? Izvi zvimwe ndizvo zvakajairika chinhu zvaunonzwa Alex Honnold paakabvunzurudzwa. Uye ndizvo izvo tarenda uye kushinga kweizvi scaler dhizaini 'yemahara solitaire' yamutungamira kuratidza zvisingaiti: Fungidzira uchikwira 900 metres pasina chengetedzo kana rubatsiro kubva patambo, iro dombo chete, maoko ako nemakumbo ako. Verenga pamusoro kana iwe uchida kuziva ruzivo rweiyi nyaya.
Zvinhu gumi zvaunofanira kuziva nezve Severiano Ballesteros; Ngano yegorofu
Nemazita makumi mashanu nemanomwe akaunganidzwa, uye kusimuka kweanosvika mazana masere nemazana masere nemakumi masere ayo airatidzika seakarasikirwa nechiyero Seve ballesteros yakaiswa munhoroondo yeGorofu sengano mumaziso epasi. Hwake kutanga uye kutsungirira zvakamuita iye imwe yeakanyanya kutaurwa eiyo gorofu Pasi rose. Isu tinokuudza iwe kuda kuziva kweiyi golfer uye kwake kamwe kamwe kwemitambo kuderera.
Zvinhu gumi Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Lindsey Vonn: Iyo Yakanyanya Alpine Skier.
"Kana vanhu vachitaura pamusoro pezvinyorwa, zvinonyanya kuoma kuzvityora" Uye kana akanakisa emuchadenga epasi achidaro, tinomutenda. Lindsey Vonn yakazvisimbisa semumwe wemakwikwi akanakisa mu Ski alpine yenyika. Kufungisisa uye kushanda paunenge uchikwikwidza zvinhu zviviri hunhu hunomukwikwidza, saka zvibodzwa, kukunda uye zvinyorwa zvinouya zvega.
Windsurfing uye iyo Ultra Trail: Mitambo miviri yakasiyana, iyo imwechete yekunzwa
Mutambo wega wega une hunhu hwakavapo mushure mekuda kwemutambi kuenda kupfuura muganho wavo. Mune ino kesi, iyo Windsurfing uyo akazvarwa kunze kwekuda rusununguko rukuru kana uchinge wasvetuka uye Ultra nzira kubva kumhanya madaro marefu kunzvimbo yakaoma. Ose ari maviri mitambo, akasiyana nenzvimbo yaanodzidziswa, anogovera chimwe chinhu chakafanana chinotikurudzira uye chinotizivisa. Uri kuzoipotsa here?
1 2 3 ... 21 Zvadaro